Xiddigtii Waaberi Way Soo Baxday Waa Xildhibaan Nacnac. | Somaliland Today
← KULMIYE Jab Oo Daaha Ayaa Loo Rogay..
“Waar, Annagana Col Ha Nagaga Tagina, Idinkuna Ceeb Ha Taransanina”! →
Xiddigtii Waaberi Way Soo Baxday Waa Xildhibaan Nacnac.
Shaki kuma jiro inay xukuumadda soo socotaa Wadani tahay waana Xusbiga qudha ee gaajada iyo Sicir bararka, Ictiraaf la’aanta, hanti boobka ,qabyaaladda, wasiiro xumida, kala sooca iyo Deked xaraashka joojin doona taa waa la hubaa. Mudane xirsi baa sheegay arintaa Somaliland jeegaani ma anfacdo giraanbaa anfacda waayo ummaddu min Laasqoray illaa Saylac waa dad saboola oo xoolo dhaqato oo biyo iyo baad u baahan lacag sibidh iyo dhagax la geliyo uma baahna waxay u baahan yihiin dawlad Xoolaha iyo reer miyiga dib u soo noolaysa. Ummadda xoolaha oo la dhaqaaleeyo waa baahida koobaad. Ninka toban aqal lacagta geliyey maxaa ummadda kaga soo noqon waa toban
dundumo, Dundumadaba waa la hoos seecdaa laakiin ninka seddex boqol oo xoolo hayaa waa noloshii Somaliland ee dhabta ahayd waa la cunayaa waa la dhamayaa waa la dilaalayaa waa la dhoofinayaa. Wadani wuxuu ka muuhiim dhigidoonaa dhaqaalaynta xoolaha nool iyo biyo iyo baad siinta reer miyiga.
Haddaan Xildhibaan Nacnac u soo noqdo waxaan arkaa inuu Nacnac yahay (signal) dhaba oo ka yimi xagga gunta madaxtooyada qaar kaloo badanina way soo socdaan. Wadanka dantiisa waxaa loo wada arkaa waa Wadani oon ka muuqan wax cid gaara ay maali doonto ee danta guud ka shaqayn doona. U fiirsada dunada cilimiga baadhay waxay yidhaahdaan calaamadaha lagu garto HOGAANKA WACAN WAXAA UGU HOREEYA HOGAAMIYAHA WACANI WUXUU UMMADDA KA SOO DHEX SAARAA HOGAAMIYEYAAL WACWACAN. HOGAANKA WADANI U FIIRSADA:
_ Hirsi H Cali, Alla Bari , Abdiqaadir I Jirde, prof Ismaciil Buubaa, ina Qabile, khaliifka Sool, Qoryoolay iyo Timacadde iyo ismail yare iyo uur cadde hussen caydiid iyo qaar kaloo badan.
PROF Ahmed ismail wuu marin habaabey waayo horuumarka iyo kartida daacada uu ka sheekaynayaa runtii Muuse Biixi ma agtaal ee Cabdiraxmaan bay agtaal. Waxaana cad in Prod Axmed Ismail mar labaad ku khasaarayo xagga siyaasadda geeska Afrika nin xunna maaha waa creamkii Somaliland laakiin TAMAANIDA ayuu si qaldan u ciyaaray markii labaad. Markii horena Xamar si qaldan buu tamaanidaa u soo ciyaaray oo wadan aan madaxweyne nimo looga ogolayn buu dad kale oon reer Somaliland ahayn la tashaday wuu khamaaray labada jeerba.
Kulmiye maanta ummaddu qabyaalad kumay diidin ee wadanka macluulbuu baday oo dadkii boqolaalkun baa waxay dheriga saaraan kari kari la oo sicirbararku aafeeyey. Saylad la soo dilaalaa ma jirto, qaxoontigii xooluu ka madheen badda dul dejin kariwaaye si ay kauunka u bartaan sida loo cuno. Kulmiye waa gaajo iyo hawo beena oo hebel baa taajir noqonaya waa nolol khayaali ku dhisan.
Muse siduu imika wax u maamulo ee xun ayuu doonayaa inuu Madaxtooyada la tago. Madaxtooyo noqon mayso ee xero JIN-DAGAAGAY BAY NOQONAYSAA.